» “प्रदेश १ बाट मन्त्री : सुरेश, सुदन, या मोदी ? “प्रदेश १ बाट मन्त्री : सुरेश, सुदन, या मोदी ? – हाम्रो खबर
“प्रदेश १ बाट मन्त्री : सुरेश, सुदन, या मोदी ?
हाम्रोखबर संवाददाता 529 Views
“उदयपुर । कांग्रेसलाई साथ दिएर गठन भएको सरकारमा सहभागी गराउन माओबादी केन्द्रले मन्त्रीहरुको टुंगो लगाउन अन्तिम कसरत थालेको छ । जसअनुसार कुल ४९ मध्ये १३ जना सांसदको नामावली सम्भाबित मन्त्रीको सूचीमा राखिएको छ ।”
“सम्भाबित सूचीकृत सांस्दहरुको नाम सार्वजनिक भएको छ । जसअनुसा प्रदेश नम्बर १ बाट संघीय सरकारको मन्त्रीका लागि सुरेशकुमार राई ‘हिमाल’, सुदन किराँती र अमनलाल मोदीको नाम ‘सर्टलिस्ट’मा राखिएको हो ।”
“पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले अघिल्लो साता पेरिसडाँडामा आयोजित एक कार्यक्रममा आफ्नो दलका ४९ जनै सांसदलाई मन्त्री चाहिएको बताएका थिए । पार्टीबाट मन्त्री पठाउने कार्यमा आकांक्षी बढी भएकाले सकस भएको घुमाउरो प्रतिक्रिया दिएका प्रचण्डसहितको नेतृत्वले अन्ततः १३ जना सम्भाबितहरुको सूची तयार पारेको बताइन्छ ।”
“सर्ट लिस्टमा एक दर्जनबढीलाई राखिएको भएपनि माओवादीको भागमा भने आधादर्जन (६ वटा) मात्र मन्त्रालय पर्नसक्ने देखिएको छ । यसअघि नै पम्फा भुसाल र जनार्दन शर्मा मन्त्री बनीसकेकाले लगभग भागबण्डा अनुसार माओबादीले आकांक्षी ४ जनालाई मात्र मन्त्री बनाउन सक्नेछ ।
“कुन प्रदेशमा को ‘सर्टलिस्टेट’ भए ?
१ नम्बर प्रदेश :
१, सुरेशकुमार राई (हिमाल)
२, सुदन किराती
३, अमनलाल मोदी
२ नम्बर प्रदेश :
मातृका यादव बागमती प्रदेश :
१, हरिबोल गजुरेल
२, शशी श्रेष्ठ
३, अञ्जना बिसंखे
“लुम्बिनी प्रदेश :
१, महेश्वर गहतराज
२, जयपुरी घर्ती
१, जनार्दन शर्मा (मन्त्री भइसकेका)
१, हरिराम चौधरी,